Ule: Nyocha ule | Martech Zone
Ule: ule nyocha
O siri ike na-abịa na ihe atụ maka ibu a na-etinye na sava weebụ ya mere na-aga. Were ya na ị bụ sava weebụ na ndị ọbịa gị bụ ite tomato. Ọ bụrụ n’inwere nri otu ma ọ bụ abụọ, ị ga - ebu ha mfe. Kpokọta narị ole na ole na ogwe aka gị ma ọ nweghị nri ọ bụla nwere ike ị nweta ebe ha kwesịrị. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere ike belata oke nke ọ bụla,